Nayakhabar.com: कसले मिलाई दियो, छुट्टिएका जितु र दमनलाई ? गाईंजात्रामा सँगै आउँदै
कसले मिलाई दियो, छुट्टिएका जितु र दमनलाई ? गाईंजात्रामा सँगै आउँदै
काठमाडौं । हास्य कलाकारद्वोय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंशको जोडीलाई मित्रता र कलाकारिताको आदर्श जोडी मानिने गरेको छ। नेपाली हास्यकलाकारहरूका यस्ता विभिन्न जोडी पनि छन् जो समयको क्रमसँगै अलग भएका पनि छन्, जसमध्ये विरलैमात्र फेरि साथै भए।
आज कुनै समयमा निक्कै चर्चामा रहिरहेका बखत आफ्नोबाटो अलग गरेका हास्य कलाकार जितु नेपाल र दमन रूपाखेतीले मित्रता दिवसको दिन पारेर आफूहरू फेरी एक भएको घोषणा गरेका छन्। जितुले फेसबुकमा आफ्नो र दमनको फोटो पोस्ट गर्दै उनीहरूको पुनस्मिलन भएको सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरू करिब १० वर्षपछि फेरि सँगै हुन लागेका हुन्।
उनले दमनलाई संकेत गर्दे बिचमा मित्रले अलग बाटो रोजेकाले आफू पनि अलग हुन बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्। जितुले आगामी गाईजात्राबाट आफूहरू एकसाथ आउन थालेको पनि पोस्टमा लेखेका छन्।
फेसबुकमा उनले पोस्ट गरेको स्टाटस यस्तो छ
आज मित्रता दिवस रहेछ, सबै मित्रहरूको उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना गर्दछु। एउटा मित्र जो संग जोडी भयर धेरै संघर्ष गरीयो, दुख गरीयो तर बिचमा मित्रले अलग बाटो रोज्यो, म पनि अलग हुन बाध्य भय र १० बर्ष उ बिना नै गाईजात्रा गरे , यसपालीको गाईजात्रामा हामी फेरी, शिवहरी बैरागी, निरज नेपाल सहित भाद्र २ गते देखी हुने गाईजात्रामा संगै प्रहसन गर्दैछौं । उ बेलमा अत्न्तै रूचाईयको हाम्रो जोडीलाई यसपाली कसरी हेर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो प्रतिक्षा छ। आसा छ राम्रै प्रतिक्रीया आउनेछ। तिते जीरे गाईजात्रा भाद्र २ देखी कमलादीमा है।।।